Sida loo laab Videos Isticmaalka VLC
VLC waa ciyaaryahan hodan warbaahinta la warbaahinta ballaaran ciyaaro muuqaalada iyo ogolaado in aad si ay u abuuraan waayo aragnimo xiiso leh. Haddii aad jeclaan qaar ka mid ah video ama aad rabto inaad aragto qaarkood wax si faahfaahsan aad mar walba isticmaal muujinta, loop. Waxaad awoodi kartaa loop video oo dhan ama qayb ka mid ah video on loop ka. Halkan waxaan ku arki doonaa tallaabo-tallaabo hage loop videos on ciyaaryahan VLC.
Qeybta 1: Nagatimo video on VLC on Windows
Qeybta 2: Nagatimo video on VLC isticmaalaya Mac
Qeybta 3: Ku celin qaybta gaarka ah ee video
1. Fur video aad rabto in aad loop isticmaalaya ciyaaryahan VLC. Haddii aad rabto in aad loop badan video files iyagoo aad ku dartid playlist ah.
2. Si loo loop video ah Just tagaan si ay button loop oo guji ku yaal. Haddii aad rabto in aad loop ka files kala duwan, kaliya toggle badhanka in ay ama loop ka mid ah ama dhammaan iyo toggle ilaa aad gaadho natiijo aad la doonayo.
Labadan-tallaabooyinka Hubi in videos waa in loop ilaa aad ku joojin ka dhigi doonaa. Waa in aan ogaado in button leedahay fursado kala duwan oo dhowr toggle dhexeeya loop lahayn, loop ka mid ah, iyo loop oo dhan. Waxaad mar walba ku dari kartaa file ka badan playlist ah.
Inta badan sida daaqadaha, waa isku mid Mac in loop video ama videos ka playlist . Si aad hanuuniyo, halkan yihiin tallaabooyinka ay kuu raaci kari waayay:
1. Open warbaahinta VLC ciyaaryahanka iyo furi file ama faylasha aad rabto in aad loop. Tag warbaahinta menu oo taga si aad u furtid file.
2. Si loo loop file ee playlist ah, ka hooseysa kaliya toggle button loop ka. Guji ku yaal hal mar si loop ka mid ah oo loop mar kale loop oo dhan. Waxaad riix kartaa mar kale dami toggle ah. Waxaa oo dhan waxay ku xiran tahay sida aad u rabto inuu u ciyaaro videos ah.
Kuwaasi waa tallaabooyin wax fudud in aad kala socon kartaa in videos loop ama kala duwan files video. Waxaad mar walba ku dari kartaa files badan oo playlist.
Iyada oo la abuuro ama sixiddiisa videos laga yaabaa in aad rabto in aad ka fiiri qaybta gaarka ah ee video ah. Iyadoo VLC, qaybta gaarka ah si fudud loo Sargo'an karaa button fudud. Waa kuwan tallaabooyinku aad kala socon kartaa qaybta gaarka ah loop.
1. Daahfurka video isticmaalaya VLC ku saabsan nidaamka. Tag si aad u eegto tab hore oo ka yar qalabka guji kontoroolha Advanced.
2. Waxaad arki doontaa badhamada cusub yar muuqan meesha ugu hooseysa. Haddaba si loo loop qaybta gaarka ah. Marka hore, ka sii video in ay bar bilow ah qaybta loop ka iyo click ku button loop gaar ah.
3. Hadda dhammayn loop ka, qaado video in ay hal dhibic dhamaadka guji badhanka isku mar. Waxaad arki doontaa labada dhibcood ee badhanka cas. Hadda ciyaari video iyo qaybta la Sargo'an doonaa.
Waa hab isku mid ah labada Mac iyo Windows ka hawlgala nidaamyada.
> Resource > VLC > Sida loo laab Videos Isticmaalka VLC?